Rastrabani.com | अमेरिका जसरी पनि जाने भूत चढेको छ? यो पढ्नुहाेस् - Rastrabani.com अमेरिका जसरी पनि जाने भूत चढेको छ? यो पढ्नुहाेस् - Rastrabani.com
अमेरिका जसरी पनि जाने भूत चढेको छ? यो पढ्नुहाेस्
– रत्न बिडार
अमेरिका जसरी पनि आउने भुत चढेको छ कसैलाई भने कुनै न कुनै शीप सिकेर आउनुस। बरु कपालै काट्ने शीप भएपनि आफूसँग बोकेर आउनुभयो भने तपाईलाई यहाँ बाँच्न कुनै गाह्रो छैन। हातमा शीप नभएका, भाषामा कमाण्डिङ नभएका म जस्ताले काम गर्ने भनेको रेस्टुरेन्ट, कुनै स्टोर या ग्याँस स्टेशनमा मात्र हो। भाग्यले साथ दिइहाल्यो भने कुनै कम्पनीमा छिर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो भनेको धेरैपछिको कुरा हुन्छ। –माइसन्सार डट कमबाट